Free Fire မှာသုံးသင့်တဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Skin ၅ မျိုး | Codashop Blog MM
Free Fire မှာသုံးသင့်တဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Skin ၅ မျိုး
Free Fire သေနတ်တွေကနေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Character တွေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဂိမ်းကစားပုံတွေကတော့ တကယ်အားရစရာပါဘဲ။ သူတို့က ဂိမ်းကစားနေစဉ်မှာ စကားပြောစရာ ခေါင်းစဥ်တွေပေးပါတယ်။ Battle Royal မှာ တကယ်မိုက်တဲ့ Skin တွေကိုကြွားရင်း စိတ်၀င်စားစရာ စကားတွေအများကြီးပြောလို့ပါတယ်။
Weapon Skin တွေကို အချိန်ကန့်သတ်ချက်နဲ့ဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဝယ်ယူနိုင်တယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ Free Fire က Free Event တွေကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ Skin တွေနဲ့ လူတွေကို ပျော်အောင်ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လှတာလေးထက် သေနတ် Skin တွေကတော့ Stat Sheet မှာ ပစ်ခတ်မှုအားကောင်းအောင်ပါပြုလုပ်ပေးလို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဒါကတော့ သူတို့ ကြိုက်လောက်မဲ့ Skin ၅ မျိုးပါ။
ဤရှားပါးပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Aqua Scar ကတော့ သင်ရဲ့ ရန်သူတွေကို ကျည်ဆန်များတွေ ထိုးဖောက်၀င်သွားအောင် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ သေနတ်တွေကို ကာကွယ်နိုင်အောင် Blue Wave-like Animation (အပြာရောင်လှိုင်းလို Animation ) ပါရှိပါတယ်။ ဒီ Skin ကို Water Set ကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Aqua Scar က Accuracy မြှင့်ပြီး Damage ကိုပါနှစ်ဆဖြစ်စေပါတယ်။ Top Tier ကစားသမားတွေကတော့ Aqua Scar က လှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန်ပြီး Medium ကနေ Long Range Combat အတွက် ကောင်းလို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Evil Pumpkin AK နဲ့ ပစ်ခံရရင်တော့ စုန်းတွေရဲ့ ကျိန်စာကိုခံရဖို့ ပြင်ထားပါတော့။ ဒါကိုကြားပြီးမကြောင်သေးဘူးဆိုင်ရင်တော့ သေနတ်ရဲ့ အပြင်ဒီဇိုင်းမှာ Pumpkin မျက်နှာတွေပါပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင် Glow လေးနဲ့ လင်းနို့ Effect တွေနဲ့ အလွန်ကြောင်ဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ Pumpkin Flames Set မှာ ဒီ Skin ကို ရယူလိုက်ပါ။
Evil Pumpkin AK Skin က Accuracy ရော Damage ကိုပါ နှစ်ဆဖြစ်စေပါတယ်။ Reduced Range ကတော့ နည်းပါတယ်။ AK အသုံးပြုသူတွေက Recoil Mystery ကို အသုံးပြုပေးရပါမယ်။ Foregrip ကောင်း‌ကောင်းလေး အသုံးပြုရင်တော့ Stability မြှင့်စေပါတယ်။
One island. One champion. ဒီ Venom M4A1 ကတော့ Free Fire မှာ အလှပဆုံး Skin လို့ပြောရင်လဲမမှားပါဘူး။ အစိမ်း Glow နဲ့ အမဲ ရောင်ပေါင်းစပ်ထားတာက အရမ်းလိုက်ဖက်ပါတယ်။ Cataclysm Set မှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Venom M4A1 သုံးရင်တော့ သေနတ်ပစ်နှုန်း ၂ ဆ ဖြစ်စေပြီး Damage လဲ ပြင်းစေပါတယ်။ Range ကတော့ ကျသွားလို့ ရန်သူ အနီးနားကိုတော့ တိုးရပါမယ်။ ဒီ M4A1 ထိန်းနိုင်လောက်တဲ့ Recoil ဖြစ်ပြီး Attachments တွေတက်နိုင်လို့ က ခုမှ စပြီး ကစားတဲ့သူတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။
‘Blood Moon is here. Death is coming’။ ဒါကတော့ သတိပေးချက်ဖြစ်ပါစေ။ ဆာမူရိုင်းအသွင်ကို အခြေခံထားတဲ့ Skin ကတော့ အလွန်စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အနီရောင် ပူဖောင်းလေးတွေ ဒီဇိုင်းနဲ့ အလွန်မိုက်ပါတယ်။ AR – Blood Moon Set မှ ရယူပါ။
အသုံးပြုသူတွေက Damage နှစ်ဆရရှိပြီး Range လဲ ပို‌‌‌‌ဝေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Accuracy လျော့လို့ သေချာချိန်ပြီးပစ်မှ ထိမှာပါ။
ဒီသေနတ်ကတော့ သွေးအလွန်စာနေတာပါ။ သင်မှာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် Vibe ရှိနေရင်တော့ ဒီ Vampire FAMAS က သင့်နဲ့ အလွန်ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒီ သေနတ် Skin ကတော့ ရဲရဲနီနေတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ လင်းနို့ Animation နဲ့ပါ။ Phantom Assassin Set ကနေ ဒီ Skin ကို ရယူလိုက်ပါ။
Codashop ကို ဒီနေ့ ဘဲလာရောက်ပြီး Free Fire အတွက် Diamonds တွေကို ဖြည့်လိုက်ပါ ! #BetterFasterSafer ဖြစ်ပြီး Log-ins ၀င်စရာလဲ မလိုအပ်ပါ။
Previous articleLifeAfter Item Code Promotion
Next articleWave Money ဖြင့် Free Fire မှာ Diamond တွေ ဝယ်လိုက်ပါ